Ukusebenziseka Kwezinga Lokuguqulwa: Umhlahlandlela Wezinyathelo Ezi-9 Kumanani Akhuphukile Okuguqulwa | Martech Zone
Njengabakhangisi, sihlala sichitha isikhathi sikhiqiza imikhankaso emisha, kepha asihlali senza umsebenzi omuhle sibuka esibukweni sizama ukwenza ngcono imikhankaso nezinqubo zethu ku-inthanethi. Okunye kwalokhu kungahle kube ukuthi kuyamangaza… uqala kuphi? Ingabe ikhona indlela yokwenza isilinganiso sokuguqulwa (CRO)? Yebo yebo… kukhona.
Ithimba Ochwepheshe Bezinga Lokuguqulwa bane-CRE Methodology yabo abahlanganyela kuyo le infographic bahlanganisa iqembu neKISSmetrics. Imininingwane ye-infographic izinyathelo ze-9 zamazinga wokuguqulwa angcono.
Izinyathelo Zokuthuthukisa Amanani Wokuguqulwa
Nquma Imithetho Yomdlalo - thuthukisa eyakho Isu leCRO, imigomo yesikhathi eside, nokuthi uzolinganisa kanjani impumelelo. Qala ngezivakashi zakho engqondweni bese uhamba ngezinyathelo okufanele uzithathe ukuguqula ikhasimende. Ungenzi ukucabanga!
Qonda Futhi Tune Imithombo Ekhona Yethrafikhi - thuthukisa umbono wezinyoni-iso wezakhiwo zakho zedijithali bese ubona ngeso lengqondo lakho ukuthengiswa kwemfucuza, lapho izivakashi zivela khona, zifika kumaphi amakhasi afika kuwo, nokuthi zihamba kanjani kusayithi lakho. Thola izindawo ezinethuba elikhulu lokuthuthuka.
Qonda Izivakashi Zakho (ikakhulukazi ezingaguquki) - Ungaqageli - thola ukuthi kungani izivakashi zakho zingaguquki ngokuqonda izinhlobo ezahlukahlukene zezivakashi nezinhloso, ukukhomba izingqinamba zesipiliyoni somsebenzisi, nokuqoqa nokuqonda ukuphikisa kwezivakashi.
Funda Indawo Yakho Yemakethe - Funda izimbangi zakho, izimbangi zakho, uchwepheshe wezezimboni, nokuthi amakhasimende akho athini ezinkundleni zokuxhumana nasemasayithini wokubuyekeza. Ngemuva kwalokho, hlola amathuba wokuthuthukisa ukuma kwakho ngokwakha amandla ayisisekelo enkampani yakho.
Veza Ingcebo Efihliwe Ebhizinisini Lakho - Thola ukuthi iziphi izici zenkampani yakho ezithandeka kakhulu kumakhasimende angahle abe khona, wethule lezo zimpahla ngesikhathi esifanele kunqubo yokuthenga, bese utshala isikhathi ukuthola, ukuqoqa nokubonisa lezo zimpahla.
Dala Isu Lakho Lokuhlola - Thatha yonke imibono oyikhiqizile ocwaningweni lwakho bese uyibeka phambili leyo emikhulu, enesibindi, eqondisiwe ezokhulisa ibhizinisi lakho ngesikhathi esifushane. Izinguquko ezinesibindi zikunikeza inzuzo ethe xaxa, futhi uthola inzuzo esheshayo emikhulu.
Dizayina amakhasi wakho wokuhlola - Idizayini ne-wireframe yesipiliyoni somsebenzisi omusha ekholisayo, ekholwayo, futhi esebenziseka kalula. Yenza izivivinyo zokusebenziseka kaningana kufayili yocingo bese uxoxa ngazo nanoma ngubani onolwazi lokuqonda kwamakhasimende akho.
Yenza Ukuhlola Kwiwebhusayithi Yakho - Yenza ukuhlolwa kwe-A / B ekuhlolweni kwakho. Landela inqubo eqinisekisa ukuthi wonke amalungu eqembu ayaqonda ukuthi isivivinyo siyini, kungani usenza, ukuthi singena kanjani kusayithi, ukuthi sihambisana kanjani nezinhloso zebhizinisi, nokuthi uzolinganisa kanjani impumelelo. Isoftware yokuhlola i-A / B ingabala, ngokunemba kwezibalo, ukuthi iyiphi inguqulo edala ukuguqulwa okuningi.
Dlulisa imikhankaso yakho yokunqoba ungene kweminye imidiya - Hlola ukuthi imininingwane evela ekuhlolweni kwakho okuwinile ingasetshenziswa kanjani kwezinye izingxenye zomsele wakho wokumaketha! Izindatshana zingabiwa, ukuwina oku-inthanethi kungashintshwa kube yimidiya engaxhunyiwe ku-inthanethi, futhi kusatshalaliswe izwi kubathintana nabo ukuze bakwazi ukwenza imikhankaso yabo ibe nkulu.
I-Kissmetrics inika amandla abathengisi ukwenza i-Customer Engagement Automation (i-CEA) ngokubasiza ukuthi bahlaziye, bahlukanise, futhi bahlanganyele bonke endaweni eyodwa ngemibiko efundeka kalula nokusebenziseka kalula komsebenzisi.
Cela iDemo ye-Kissmetrics
Tags: ukuguqulwa kokuhlelwaochwepheshe bezinga lokuguqulwaukusebenza kwesilinganiso sokuguqulwaizinyathelo zokuguqula izinga lokuguqulwaisu lokuguqula izinga lokuguqulwaindlela yokusebenzakhokhocro isuukwakheka
I-SEO Buddy: Uhlu lwakho Lokuhlola lwe-SEO Nemikhombandlela Ekwandiseni Ukubonakala Kwesikhundla Sakho se-Organic
Ngo-Apr 17, i-2021 ku-3: 23 AM
Okuthunyelwe okuhle! Umhlahlandlela wezinyathelo eziyisishiyagalolunye ongenhla kufanele ukunikeze isisekelo sokuhlela into ngayinye yekhasi lokufika, okuholele ekuguqulweni okuthuthukile